UBulungisa boLwimi bufuna ukudala ihlabathi apho wonke umntu anokuthatha inxaxheba ngokupheleleyo kuluntu nokuba luluphi na ulwimi aluthethayo. Sikholelwa ukuba uLwimi lwama-411 lunokuba negalelo kwintshukumo yoBulungisa boLwimi kwaye sisoloko sizama ukuchonga iindlela esinokuthi senze ngazo impembelelo.
Sikholelwa ukuba ukufikelela kulwimi asinto ilula, kodwa lilungelo. Ngokubonelela ngenguqulelo efikelelekayo, sinethemba lokunceda wonke umntu afikelele kulwazi.
ULwimi 411 lugqibezela iprojekthi nganye ngokweshedyuli nangowona mgangatho uphakamileyo. Ngokugxila kwinkonzo eyenzelwe wena, amaxabiso afikelelekayo kunye nokwaneliseka kwabathengi, sihlala sizabalazela ukuhlangabezana kwaye sigqithise besilindele.
Ngaba uyafuna ukufunda ngakumbi malunga noBulungisa boLwimi?